Ubiq စျေး - အွန်လိုင်း UBQ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ubiq (UBQ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ubiq (UBQ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ubiq ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 504 443.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ubiq တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ubiq များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
UbiqUBQ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.114UbiqUBQ သို့ ယူရိုEUR€0.0961UbiqUBQ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0866UbiqUBQ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.103UbiqUBQ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.01UbiqUBQ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.716UbiqUBQ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.51UbiqUBQ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.423UbiqUBQ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.15UbiqUBQ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.159UbiqUBQ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.52UbiqUBQ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.88UbiqUBQ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.609UbiqUBQ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹8.5UbiqUBQ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.19.17UbiqUBQ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.156UbiqUBQ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.174UbiqUBQ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.53UbiqUBQ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.789UbiqUBQ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥12.11UbiqUBQ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩134.73UbiqUBQ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦43.85UbiqUBQ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽8.32UbiqUBQ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.1
UbiqUBQ သို့ BitcoinBTC0.00001 UbiqUBQ သို့ EthereumETH0.000296 UbiqUBQ သို့ LitecoinLTC0.00209 UbiqUBQ သို့ DigitalCashDASH0.00125 UbiqUBQ သို့ MoneroXMR0.00127 UbiqUBQ သို့ NxtNXT8.86 UbiqUBQ သို့ Ethereum ClassicETC0.0167 UbiqUBQ သို့ DogecoinDOGE32.77 UbiqUBQ သို့ ZCashZEC0.00138 UbiqUBQ သို့ BitsharesBTS3.5 UbiqUBQ သို့ DigiByteDGB3.63 UbiqUBQ သို့ RippleXRP0.403 UbiqUBQ သို့ BitcoinDarkBTCD0.00391 UbiqUBQ သို့ PeerCoinPPC0.377 UbiqUBQ သို့ CraigsCoinCRAIG51.74 UbiqUBQ သို့ BitstakeXBS4.84 UbiqUBQ သို့ PayCoinXPY1.98 UbiqUBQ သို့ ProsperCoinPRC14.25 UbiqUBQ သို့ YbCoinYBC0.00006 UbiqUBQ သို့ DarkKushDANK36.44 UbiqUBQ သို့ GiveCoinGIVE245.94 UbiqUBQ သို့ KoboCoinKOBO25.87 UbiqUBQ သို့ DarkTokenDT0.105 UbiqUBQ သို့ CETUS CoinCETI327.97